Toddoba Talooyin Si Looga Dhigo Tirooyinka Musqusha Inay Dheeraadaan - Tubbooyinka Kushiinka Ugu Fiican 2020 | Qasabadaha jikada ugu fiican | Qasabadda Jikada
Bogga ugu weyn / blog / Toddoba Talooyin Si Looga Dhigo Musqusha Musqusha
Toddoba Talooyin Si Looga Dhigo Musqusha Musqusha
2021 / 09 / 12 Qoondayntablog 1083 0
Maxay taayirrada dadka qaar uga soo baxaan guryahooda cusub wax yar ka dib markii la dayactiray?
Tani waxay si gaar ah run ugu tahay foornooyinka musqusha, waana sababta oo ah ma aadan qaban shaqo wanaagsan markaad codsaneyso foornada.
Kuwa soo socda ayaa kuu sheegaya toddobo talooyin si aad uga hortagtid in tirooyinka musqusha ay dhacaan!
1, Timaha Baselayer jiidaya
Musqusha gidaarka musqusha ka hor, waa inaad marka hore qabataa shaqo wanaagsan oo ah shaqada-timaha jiidista timaha-xididka. Tani waa in la kordhiyo dhejinta darbiga, si looga hortago dhejiska dhoobada ka dib markii xaalku aanu adkayn. Ha dhayalsan tallaabadan, talaabadani waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa ka hortagga taayirada inay soo baxaan.
2, Foornooyinka darbiga oo biyo lagu qooyay
Waxaa muhiim ah in la ogaado in saldhiggu yahay in si buuxda loo waraabiyo oo qoyaan ka hor inta aan la xoqin. Haddii kale, qoyaanka ku jira hoobada waxaa si dhaqso ah u nuugi doona salka qalalan iyo foornada oo si dhakhso ah isugu duuban. Tani waxay saamayn ku yeelan doontaa isku -xidhnaanta isku -xidhka, goor dambe, markaa way fududahay in laga soo muuqdo xayndaabka xaaladda, sidaa darteed dhuuqidda foornada derbiga iyo waraabinta hoose ayaa aad loogu baahan yahay.
3, Nadiifi salka
Haddii ay jirto nuurad nuurad ah, rinjiga emulsion, gidaarka gidaarka, iyo waxyaabo kale oo lagu qurxiyo derbiga, ama wasakh dhulka taal, waa in la nadiifiyaa. Haddii kale, hoobiye sibidhka si fiican uguma xidhnaan doono saldhigga. Intaa waxaa dheer, haddii darbiga laftiisu dildillaacdo, waxay u baahan yihiin in la daweeyo ka hor inta aan la adeegsanin foornooyinka. Tani waxay ka fogaan kartaa dildilaaca mustaqbalka inuu sii weynaado taasoo keenta in marmarka derbiga dillaacaan ama ka dhacaan xaaladda.
4, Sawir khadadka
Ka hor inta aanad xayndaabyada saarin, waxaad u baahan tahay inaad hore u sii hesho khad toosan oo wanaagsan. Foornooyinka lagu dhajiyay tan oo ah halbeegga ayaa kaliya noqon doona labis dherer ahaan iyo toosan oo qurux leh. Intaa waxaa dheer, dhismaha ka hor intaan gidaarku u baahnayn in la dul -dhigo agagaarka kontroolka sare. Ka-soo-baxyada is-goysyada ee dhulka ka soo baxa si loo fududeeyo xakamaynta cabbirka kala-goynta foornada.
Marka hore, midabka, qaab-dhismeedka iyo fidinta dusha sare ee foornooyinka waa in si adag loo xushaa iyadoo lagu saleynayo shuruudaha naqshadeynta sawirrada, ka dibna horay loo jeexay si waafaqsan shuruudaha sawirrada. Khaladaadka cabbirka, midabka iyo qaab-dhismeedka laga yaabo in ay ka dhacaan gogol-xaadhka waa in la hagaajiyaa oo la is-dhaafsadaa ilaa natiijada ugu fiican laga gaadho, ka dibna si habsami leh loo agaasimo iyada oo la raacayo dariiqa si habsami leh.
Foornooyinka waa in lagu dhajiyaa 1: 3 hoobiye sibidh adag oo qallalan. Dhumucda hoobiye waa in la xakameeyaa ilaa 20mm. Dhagaxyada gadaashiisa waa inay qoyaan ka hor intaan la rinjin, dhinaca horena waa inuu engegaa. Ku dheji foornada hoobiye sibidhka sidii loo baahdo oo ku dhaji dusha foornada dubbe caag ah ilaa uu cufan yahay oo siman yahay. Tile -hayaha marka la adeegsado madaafiicda guud ahaan si isku mid ah ayaa loo dahaadhi doonaa, waa in laga hortago soo bixitaanka foornada.
7, Xirxirrada laabatooyinka
Dhagax dhigida 24 saacadood ka dib nadiifinta nadiifinta. Jillaabidda ka hor tolidda dhoobada waa in laga tirtiraa wasakhda, ka dibna lagu xidhaa dabool gaar ah. Iyada oo loo marayo hababka 7 ee kor ku xusan, waxay waxtar u leedahay yareynta dhacdada daadinta foornada, waxaan rajeynayaa inaad xusuusato!
Hore:: Huida Sanitary Ware: Dakhliga qeybtii hore ee sanadka wuxuu ahaa 1.743 Bilyan Yuan, koror ah 32.38% Sannadkii Next: Kobaca 371% VS 70% Hoos u dhac! Tartanka Suuqa Musqusha oo Dhan Miyuu Gaaray Marxaladda “Cad -kulul”?
2021 / 09 / 24 734